mpamatsy hatsaran-tarehy hafa mpamatsy sy orinasa - mpanamboatra fitaovana hatsaran-tarehy hafa any Sina
fitaovana hatsaran-tarehy hafa
Cosmetika tsara kalitao indrindra 18 Colour Glitter Matte Nude Pi ...
10 pcs borosy kely eyeshadow napetraka boribory Head M ...
Famolavolana haingam-pandeha avo lenta 11 pcs vita amin'ny borosy ma ...
Manicure Kit Pedicure Set Nail Clipper Callus Esory ...
MURAN Vacuum blackhead fanesorana fitaovana milina penina microdermabrasion fotsy fotsy hoditra manintona fitaovana suction
Ity dia milina fitrohana multifunctional izay afaka mifoka blackhead, mony, mite, loto amin'ny tarehy ary ny hoditry ny tarehy madio dia afaka mitazona ny hoditrao ho tanora, tanora kokoa ary feno tanjaka. Te hahafinaritra kokoa ve ianao? Mahazoa iray, hiseho ny fahagagana aorian'ny fampiasana andro maromaro. Tsy dia hivoaka ny blackhead raha mikiry hampiasa ianao. Feature & Function: - Ny vokatra dia endriny rehetra ao anaty iray mba hifanaraka amin'ny ergonomika mba hahazoana mora foana. - Haavo telo hamaly ny filan'ny di ...
Fivarotana mafana Fitaovana fanadiovana hoditra tsy miankina amin'ny hoditra hoditra Blackhead Suction Instrumen
Function: 1. Esory ny Blackhead, endrika madio madio ny blackhead remover vacuum blackhead remover vacuum blackhead 2. Ho an'ny mony, ny fikolokoloana ny hoditry ny hoditr'omby 3. Ny fitsaboana ny hoditra sy ny ketrona, ny fanalefahana ny hoditra. Ny anaran'ny vokatra vacuum blackhead remover Model NO MC003 Anaran'ny marika: OEM / ODM Fitaovana: ABS & Plastika amin'ny fitsaboana amin'ny mony, fanesorana ny lohany mainty, fanadiovan'ny mason-koditra, Pore Shrinkin izay mamaly ny USB miampatra rano ...
Fanjaitra Titanium ZGTS Derma Roller 192 matihanina momba ny fikolokoloana tarehy sy ny fikolokoloana volo CE Certificate voaporofo
Inona no azon'ny dermaroller atao aminao?
1.Fanafosafo, fanesorana ny mony, fanatsarana ny fery, famelomana aina
2.Ny fifantohana tery amin'ilay tranokala (glabellum, ketrona, paratra)
3. Atsofohy ny mason-koditra
4. Fitsaboana gravidarum striate
5. Amboary ny tsipika ketrona sy tsara
6. Fitsaboana ny maratra mony sy ratra manasitrana
8.dermaroller dia mandaitra amin'ny karazana fitsaboana amin'ny hoditra.
Mini elektronika arina blackhead remover vacuum rechargeable fitaovana fanadiovana fitaovana fanadiovana fitaovana tarehy
Fantatrao ve ny anton'ny fananganana komandy? Antony fananganana Blackhead: ny madio tsy feno, ny fanentsenana ny mason-koditra, ny tady, ny adin-tsaina, ny fihamafisan'ny horona, ny metabolisma ratsy. Misokatra ny mason-koditra voasarimakirana Cuticle. Miseho mony mainty na acicular ny mason-koditra amin'ny fotsy beige, indraindray mipoitra ny mony. Anaram-pamokarana Mini saribao fanala mainty fanala volo fitaovana azo soloina fitaovana fitrohana fitaovana suction modely TSY MISY MC001 Anaran-marika: OEM / ODM Fitaovana: ABS & Fea plastika ...
Mafana indrindra !!! fanjaitra derma roller540 kilasy mpitsabo fanjaitra mikraoba dermarollermicroneedletitanium
Inona ny derma roller?
Dermaroller dia mampiasa tsorakazo vita amin'ny fametahana fanjaitra maromaro, atambatra amin'ny ranon-tsakafo azo ampiasaina, mihodina matetika any amin'ireo toerana ilaina hositranina. Afaka manindrona sambo mikraoba 300 000 mahery amin'ny epidermis ao anatin'ny dimy minitra izy io, mamorona rafitra fandefasana otrikaina mahomby eo anelanelan'ny epidermis sy tavy subcutaneous, avy eo ny tsiranoka mahavelona dia afaka miditra amin'ny hoditra amin'ny fomba mahomby. Amin'izay dia lasa lavorary kokoa ny vokatry ny fikolokoloana hoditra.
Ny fitsaboana micro-fanjaitra dia mandaitra, azo antoka ary azo antoka ho an'ny: mampihena ny fery amin'ny mony, mampihena ny ketrona sy ny tsipika tsara, manatsara ny fisehoan'ny marika mihinjitra, ny ranomandry sy ny valan'avom-bovoka, ny fanalefahana ny hoditra ary ny fahanterana antitra sy ny fahasimban'ny andro.
Rose Gold Silver Comedone Extractor Pimple Pin Fitaovana Blackhead Jarony Fanalana Jarony Black Spots Pore Cleaner
Ny Needle Remover Needle dia fitaovana hatsarana, vita amin'ny fitaovana vy tsy misy fangarony.
Ity fanjaitra fanesorana mony ity dia misy faran'ny boribory iray ary faran'ny iray manondro. Mety aminao ny manempotra mony na mony.
Ampiasao aorian'ny fandroana mafana na fandroana na aorian'ny famaohana ny tarehy rehefa malemy kokoa ny hoditra ary misokatra ny mason-koditra.
Raha ilaina dia ampiasao ny fanjaitra ary zahao tsara ny hoditry ny hoditra raha tsy matotra ny poresanao.
Ahenao kely ny fahasimban'ny hoditrao